Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo: Tsipahan’ny Mpitondra Katolika Ny Sampan-dRaharaha Fitsikilovana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2013 23:46 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Korea Atsimo, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Hazavana be-nà jirom-piaretan-tory nataonà mpitarika Katolika 700 hitsipahany ny fitsabahan'ny sampan-draharaham-pitsikilovan'ny fanjakana amin'ny fifidianana filoha no natao tany Seoul  [ko].
Ny 23 Septambra 2013, Pretra Katolika roanjato sy masera 500 manao ny akanjony, miaraka aminò vondron'olon-tsotra, no nanao hetsi-panoherana tany Seoul Plaza. Mpanao fihetsiketsehana dimy arivo no nanatrika ilay hetsika izay naka endrika fanompoam-pivavahana ( vinavinain'ny mpitandro filaminana ho latsaky ny roa arivo) ary io no fotoana voalohany, tato anatin'ny folo taona, izay nikarakaran'ny Fiangonana Katolika fanehoan-kery goavana, amin'ny maha-vondrona azy.
Raha iverenana ny tamin'ny tapaky ny volana Aogositra, dia mpitondra fivavahana 4.500 mahery kely no nivory tao amin'ny Oniversiten'i Sogang, toerana nianaran'i Park, Filoha ankehitriny , mba hanao fanambaràna izay iantsoana ny Filoha Park mba hanao fanadihadiana sy hiala tsiny noho ilay tantara ratsin'ny sampan-draharaha fitsikilovana. Nalefan'ilay mpanao gazety Media Mongu tamin'ny lahatsary Youtube  ny zava-niseho.
Nobitsihinà Pretra Katolika iray (@ngo7979) sy Masera Juliana (@nun1004) manaraka eto ireo sarin'ny hetsi-panoherana miaraka amin'ny fanehoankevitra .
Tsy afaka ny tsy haninona tsy haninona intsony izahay raha mbola tandindonin-doza ny demokrasianay. Te-hisaotra ireo rehetra nanohana ny antso tamin'ny fanatrehana ny ‘lamesa iantsoana ny fandravàna ny Sampan-draharaha Nasionaly momba ny Angom-baovao – National Intelligence Service (NIS) sy hananganana indray ny demokrasiantsika’. Iangaviana ianareo hiaraka aminay hatramin'ny farany.
Hiaraka hijoro isika mandra-pandresin'ny marina sy ny fitondrantena tsara.
Ireo pretra katolika tao amin'ny Plaza no hitantsika.
Inty no maneho ny fidiran'ny mpitondra fivavahana telonjato tao amin'ny toerana nanaovana ny hetsi-panoherana nandritra ny lamesa/hetsi-panoherana tao amin'ny Seoul City Hall Plaza.
Mpanoratra iray izay ankafizin'ny olona, i Gong Ji-young no nibitsika ny sarin'ny  fivoriana ary nanoratra fanehoankevitra iray [ko] momba ny tantara lavaben'ny fampiasana ny fiangonana Katolika ho fialokalofana ho an'ny demokrasia. Ohatra, raha iverenana ny taona 1970 sy 80 rehefa nanjaka tato amin'ny firenena ny fitondràna jadona roa, dia nanjary sarintsarinà fialofana hanafenana sy hiarovana ireo mpikambana amin'ny hetsika demokratika ny Katedraly Myeong Dong ao afovoan-tanànan'i Seoul.
@congjee : Tranga iray voizinà pretra Katolika iray ny fampijaliana sy ny fahafatesan'i Park Jong-chul.  Ny fahatsiarovana azy ( mitatitra ny fahafatesan'i Park) no niteraka ny Hetsiky ny Demokrasian'ny Jona – June Democracy Movement  (tamin'ny 1987) RT @tgs432004: <vaovao farany> ny fanambaràna nataon'ireo Katolika mpitondra fivavahana dia misy andàlana milaza fa ‘ahiahiana efa nisy nanodinkodina nialoha (talohan'ny fandatsahambato) ny fifidianana (fifidianana filoha)’. Sambany izao no nilazan'ny fiangonana Katolika io raharaham-panodinkodinana ny resaka fifidianana io.
Efa efa-bolana mahery izao no nanoherana ny tantara ratsin'ny NIS ary manomboka tonga tsirairay ireo antokom-pinoana izay nangina hatrizay – nanomboka tamin'ny fiangonana Katolika, ireo rantsana maro avy amin'ny fiangonana Protestanta ary ny Bodista Won. Nobitsihin'ny mpiserasera amin'ny aterineto ireo fanehoankevitra hoe nahoana ireo antokom-pinoana ireo no nanaraka io hetsika io. Bitsika iray mivaky hoe :
Ny anton'ny tsy maintsy nanaovan'ny Katolika izao dingana izao dia satria tsy misy mihetsika ireo mpandray anjara mahefa, toy ny antoko politika sy ny Ministeran'ny Fitsaràna, izay heverina handray ny andraikitra amin'ity raharaha NIS ity. – Ny filankevi-pitantanan'ny Komity Katolika Miaro ny Zon'Olombelona, ny Mpisolovava Kim Hyung-tae
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/02/52100/
 fitsabahan'ny sampan-draharaham-pitsikilovan'ny fanjakana : https://globalvoicesonline.org/2013/08/23/special-probe-into-south-korean-spy-agencys-electioneering-falls-flat/
 no natao tany Seoul: http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=103544&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
 tamin'ny lahatsary Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=SCqZOtoE3jo
 nibitsika ny sarin'ny : https://twitter.com/congjee/statuses/382096327934369792
 nanoratra fanehoankevitra iray : http://www.twitlonger.com/show/mngkuv
 Katedraly Myeong Dong : http://planbox.wordpress.com/2011/12/26/myeongdong-cathedralmyeongdongkorea/
 fampijaliana sy ny fahafatesan'i Park Jong-chul. : http://en.wikipedia.org/wiki/June_Democracy_Movement#Torture_and_death_of_Park_Jong-chul
 Hetsiky ny Demokrasian'ny Jona – June Democracy Movement: http://en.wikipedia.org/wiki/June_Democracy_Movement
 tonga : http://bit.ly/16i1eas